Barbaro Cup sita rullaluistemadka Irbad - Shiinaha Viproce Warshadaha
Hordhac: barbar koob irbad saa'idka rullaluistemadka dhismeedka of DC irbad rullaluistemadka dhalista (nooca DC) laga sameeyey oo qabow strip steel giringiriyey si sax ah u sameeyay. Qaab dhismeedka DC saa'idka irbad rullaluistemadka qoreysa keydinta meel iyo awood sare. Waxay ku haboon codsiyada la meel xaddidan iyo guryaha aan adag oo ku filan inay u dhaqmaan sida raceway yihiin. No looga baahan yahay goobta axial markii DC irbad rullaluistemadka dhalista la tuujiyey guryaha. In codsiyada ugu giraanta hoose ma aha lagama maarmaan u ah DC irbad isaguu ...
Barbaro saa'idka rullaluistemadka koob irbad
Qaab dhismeedka DC irbad rullaluistemadka dhalista (nooca DC) laga sameeyey oo qabow strip steel giringiriyey si sax ah u sameeyay. Qaab dhismeedka DC saa'idka irbad rullaluistemadka qoreysa keydinta meel iyo awood sare. Waxay ku haboon codsiyada la meel xaddidan iyo guryaha aan adag oo ku filan inay u dhaqmaan sida raceway yihiin. No looga baahan yahay goobta axial markii DC irbad rullaluistemadka dhalista la tuujiyey guryaha.
In codsiyada ugu giraanta hoose ma aha lagama maarmaan u ah DC saa'idka irbad duuban haddii raceway qodaa waa shaqayn karto, siddo hoose caadiga ah DC inay is barbar dhigaan la saa'idka irbad rullaluistemadka Open iyo DC, saa'idka rullaluistemadka dhamaadka Close irbad DC u fiican yihiin dhagixiina way dhamaadka ku dhow of dhalista . kala duwan heerkulka u hawlgasho saa'idka dufan lubricated waa -20 ℃ in + 120 ℃.
Dhismayaasha of taxane kala duwan oo barbaro rollers koob irbad:
taxane ton: HK BK HKS F FH FY Ji MFH MFY
taxane inji: SCE BCE SCH BCH SN CSN B ilaa H. M MH
Next: Dhalista rullaluistemadka irbad
isaguu Cylindrical saa'idka
ayaa barbar dhac Cup Irbad saa'idka
Full dhameystir Cylindrical rullaluistemadka saa'idka
isaguu Irbad Oo Golaha Cage
isaguu Irbad Cage saa'idka
waxaa laga shaabadeeyey laba barbar dhac Cup irbad kacaan
Single Row sita rullaluistemadka Cirbad
SKF irbad sita duuban
baabbe'een, saa'idka rullaluistemadka Cylindrical
baabbe'een, oo sidda rullaluistemadka irbad
baabbe'een, oo sidda rullaluistemadka
ku baabbe'een, isaguu Catalog sita
baabbe'een, isaguu ku kacaan SKF